May 2015 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
4:35:00 AM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်5comments
ဒေါင်းဖို့ အဆင်မပြေရင် ဒီမှာ ဖတ်ပါ.
ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး (1.1 GB )
ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး (436.9 MB )
7:49:00 AM 20155comments
IMDb မှာ Ratings 8.8 အထိရထားတဲ့
Action, Adventure, Sci-F အမျိုးအစား
ဒီလထဲမှာ ရုံတင်တဲ့ ဇာတ်ကားသစ်ဖြစ်သလို
ဒီနှစ်ထဲမှာ Ratings အမြင့်ဆုံးဇာတ်ကားမို့
ဒီဇာတ်ကားကို ကျနော်သူငယ်ချင်းဆူးခင်းလမ်းသုတရသ ကနေ
upload တင်ထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
ပုံမှန်အတိုင်း pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးနဲ့
8:23:00 PM 2015, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်9comments
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ မိတ်ဆက်စရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်..
Vin Diesel ၊ Paul Walker ၊ အပြင် Jason Statham ပါ ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်ပါတယ်..
အချိန်ရရင် Fast And Furious ဇာတ်ကားတွေ ကို
၁ ကနေ ၇ အထိ
မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးနိုင်အောင် စဉ်းစားထားပါတယ်..
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ မလေးရှားက ညီမငယ်တယောက်က
ပေးပို့လာတာပါ DVD ကနေထုတ်ထားတာမို့
BluRay ထွက်ရင် ထက်တင်ပေးဦးမယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာတန်းထိုးနဲ့မို့ အစဉ်ပြေမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်..။
ပုံမှန်အတိုင်းပဲ pCloud ကရော
Download 560 MB
Vidzi.tv မှာတင်တာကိုတော့ Fast & Furious7(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး ကနေသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလိုဒီအောက်မှာလည်း တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်တင်ပေးထားပါတယ်..
6:58:00 PM Buddha 31 comments
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ online မှာ ရှိနေပြီးသားပါ..
ကျနော့်အတွက်လည်း တာဝန်ရှိတယ် ယူဆမိတာကြောင့်
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ကျနော်တို့ မသိသေးတဲ့ အချက်အလက်တွေပါ
ထက်သိရတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကြည့်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်...
ဒီနေရာကနေ ၀န်ခံချင်ကတော့ ဒီဇာတ်ကားကို ကျနော် ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ပါ..
တောင်းဆိုတဲ့ သူများလွန်းလို့ ရှာဖွေမိရာကနေ
DVD နဲ့ ထွက်ထားတာတွေ့မိလို့ DVD ကနေ ထုတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ..
ဖိုင်ဆိုဒ်ကို တွက်ဆပြီး ထုတ်ထားရတာမို့ ရုပ်သံအားနည်းတာမျိုးကို နားလည်ပေးကြပါ..
နောက်အပိုင်း တွေကိုလည်း ဒီ ပို့စ်အောက်ကနေပဲ ဆက်တင်ပေး သွားမှာပါ...
အဲဒါမှ ကြည့်တဲ့သူလည်း ရှာဖွေရ လွယ်ကူသလို
ကျနော့်အတွက်လည်း လင့်မှား လင့်ပျက်တွေကို ပြု ပြင်လို့ လွယ်မှာပါ..
ဒါကြောင့် ဒီပို့စ်လေးကို ရှယ်ထားခြင်းက အကျိုးမနည်းဘူးထင်ပါတယ်..
pCloud ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်...
6:57:00 PM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
ဒီဇာတ်ကားကတော့ တော်တော်များများ သိပြီးဖြစ်ကြမှာပါ..
အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဟာသကားအဖြစ်
The Hangover Part II နဲ့ The Hangover Part III ဆိုပြီး
ဒီ သုံးကားလုံးကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ့်..
ဒီညတော့ The Hangover (2009)ကို မြန်မာစာတန်းထိုး နဲ့
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မနက်ညမှာ ...
The Hangover Part II နဲ့ The Hangover Part III ကို
မြန်မာစာတန်းထိုး နဲ့ ဆက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်..
The Hangover Part II(2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒါကတော့ The Hangover (2009) ရဲ့ အဆက်ပါ..
Part III ကိုလည်း ဆက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်..
အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဟာသကားဖြစ်တာမို့
pCloud ကနေဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး အသေး ၂ မျိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
6:57:00 PM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 1 comment
The Hangover နဲ့
The Hangover Part II ကို
The Hangover Part III ပါ..
6:52:00 PM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Download 940 MB
6:50:00 PM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Drama | History | Romance အမျိုးအစား
ဒီဇာတ်ကားလေးကို တချို့ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ..
Romeo & Juliet ဆိုတာအများစုတော့ ကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်မယ့်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ..
အရင်က YouTube ကနေ တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်..
အခု YouTube ကနေကြည့်မရတော့တာမို့
pCloud ကနေဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
6:34:00 PM မြန်မာစာတန်းထိုး တရုပ်သိုင်းကား, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Imdb rating 6.6 ရရှိထားတာမို့လို့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားပါဘဲ
1960 ကျော်ကာလတုန်းက တရုတ်ပြည်ရဲ့ နန်းတွင်းထဲက အရှုပ်အရှင်း တွေနဲ့အတူ သွေးသောက် ညီအစ်ကို သုံးယောက်တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ ...... စာတမ်းထိုးနဲ့မို့ အညွှန်းမပေးတော့ဘူးနော် ပုံမှန်အတိုင်းဘဲ pcloud ကနေ ဆိုဒ် အကြီး အသေး နဲ့ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဒေါင်းလော့ချတာ များသွားလို့ traffic ပိတ်သွားတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်ပေးပါ။
P.S ဆိုဒ်အသေးကို youtube ကနေ upload ထပ်တင်နေပါတယ်
Watch and Download from Pcloud
720P (989.05 MB)
360P (480 MB)
Credit original burmese sub >>> AP Newschool (facebook user)
Many missed Word Fixed And Resync New Version by Michael Scofield